Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy azo ekena ny gaboraraka sy ny tandrevaka…” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy azo ekena ny gaboraraka sy ny tandrevaka…”
Hentitra hatrany ny Praiminisitra Ntsay Chiristian manoloana ny fitantanana, manomboka eny ifotony. “Tsy ekena intsony ny tsy fahafehezan’ny tompon’andraikitra ny asany ka mahatonga ny gaboraraka sy ny tandrevaka, mitarika any amin’ny fahantrana. Tokony hahita vahaolana amin’ny tranga na ny olana miseho ety ifotony ny tompon’andraiki-panjakana na voatendry izy na olom-boafidy fa tsy hiandry ny fitondrana foibe hatrany”, hoy izy tany Ambovombe Androy sy tany Amboasary Atsimo, ny faran’ny herinandro teo. Nanteriny fa antony ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ka anomezana fahefana ireo governora hampihatra ny teti-pampandrosoana eny anivon’ny faritra izany.
Mahalala ny maharary sy ny laharam-pahamehana amin’ny vahoaka amin’ny fari-piadidiany izy ireo, araka ny nambarany tamin’ny fivoriana niarahany amin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony any an-toerana.
Notsiahiviny fa omena ny tetibola sy ny fampitaovana ilain’ny faritra iasany ho fanafainganana ny zotram-pampandrosoana eny anivon’ny faritra. Notsindriny ny tokony hanovana ny toe-tsaina sy ny fomba fiasan’ny mpiasam-panjakana, mpiasam-bahoaka hamerenana ny hasin’ny asam-panjakana. “Aoka hatao ho laharam-pahamehana ny tombontsoam-bahoaka fa tsy hijery intsony ny tombontsoany manokana. Hanova ny tantaran’ny firenena isika ka takina amin’izany ny fahavononan’ny tsirairay hiova ary tokony hanatanteraka ny asany andavanandro ao anatin’ny fahendrena, ny fahamarinana ary ny fahamendrehana ny mpiasam-panjakana”, hoy ihany izy.
Tompon’andraikitra miray tendro amin’ny dahalo
Nohitsiny fa anisan’ny antony mahatonga ny tsy fisian’ny filaminana any amin’ny faritra Androy sy ny faritra Anosy ny firaisan’ireo tompon’andraikitra tendro amin’ireo olon-dratsy. Andraikitry ny rehetra ny famerenana ny fandriampahalemana. “Tsy ny mpitandro ny filaminana ihany anefa fa manana andraikitra amin’izany ihany koa ny lafintany sy ny fitsarana, mandrafitra ny OMC. Ilaina ny fandrindrana ny asa hiverenan’ny fandriampahalemana, antoky ny fiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka ny fanjakana”, hoy ihany ny praiminisitra. Notsiahiviny fa efa maro ireo ezaka ataon’ny fanjakana amin’ny fampitaovana ny mpitandro filaminana, saingy tsy ampy ny fandrindrana ny asa.
Momba ny kere kosa, nambarany fa efa mametraka rindran-damina ho fitadiavana vahaolana fohy ezaka ny governemanta. Eo koa ny vahaolana maharitra. “Efa misy paikady maro hapetraka ho fampandrosoana, toy ny fanamboarana ny lalana ary ny fananganana fotodrafitrasa isan-karazany”, hoy izy.
Anisan’ny nantitranterin’ny lehiben’ny governemanta tany atsimon’ny Nosy ny tsy fanekena ny fandikan-dalàna. “Handraisana fepetra hentitra ireo minia manao izany”, hoy izy.